Mabhuku akanakisa ekufamba | Zvazvino Zvinyorwa
Isu tinovhura bhuku nekuti tinofanirwa kuzvitakura kuenda kune dzimwe nzvimbo nemamiriro ezvinhu, kunzvenga chokwadi kuburikidza nemavara atinogamuchira seshamwari uye nyaya dzatinogona kunzwa kuzivikanwa nadzo. Nekudaro, kune mamwezve mabhuku ane chinangwa chekutitendera kuti tishanyire imwe nyika pasi pasina kutenga tikiti yekuenda chete. Izvi mabhuku akanakisa ekufamba vanova makapeti akakwana emashiripiti ekutsvakisisa mune zvakavanzika zveAsia, nzira dzeUnited States kana ngano dzeSpanish.
1 Mabhuku akanakisa ekufamba
1.1 Mumugwagwa, naJack Kerouac
1.2 India: Mushure mamirioni emamiriyoni, naVS Naipaul
1.3 Kunze Kwemusango, naJon Krakauer
1.4 Idya, Namata, uye Rudo naElizabeth Gilbert
1.5 Mazana Miles kubva kuManhattan, naGuillermo Fesser
1.6 Bato, naErnest Hemingway
1.7 Iyo Tao yeMufambi, naPaul Theroux
1.8 Wemusango, naCheryl Akatsauswa
1.9 Negungwa reCortez, naJohn Steinbeck
Mumugwagwa, naJack Kerouac
Yakanyorwa mumavhiki matatu chete pabepa risina mapepa kana nzvimbo, Mugwara, rakabudiswa muna 1957, rakakurumidza kuva iro rova chizvarwa flagship bhuku. Vechidiki kubva kuma50s vanovhurika kune matsva mifungo nemararamiro avo vakawana mune ino nhoroondo yehupenyu nhoroondo yakakwana yekufamba neKerouac mhiri kweUnited States neMexico, nyika idzo dzevanyori vane simba kwazvo vezana ramakore rechi1947 dzakafamba pakati pa1950 naXNUMX.
India: Mushure mamirioni emamiriyoni, naVS Naipaul
Zvevabereki vechiHindu asi vakazvarwa muguta rePort of Spain, muTrinidad neTobago, Naipaul akaita rwendo kuenda kunyika yemadzitateguru ake kuti ariveze mumapeji ese ebhuku iri, mufananidzo weiyo mhirizhonga uye yemweya India, yakajeka uye grey. , uko zvinhu zvakaita senge basa revakadzi, indasitiri yeHollywood kana kusangana pakati pevaHindu nevaMuslim vanoswededzwa ne Mubayiro weNobel muMabhuku nehunyengeri uye hunyoro hwevaya vanovhura maziso avo kune imwe nyika yamai izere nemazhinji ma nuances. Kunakidzwa kwevanoda nyika yema curry, iyo yoga uye iyo Taj Mahal.
Ungada here kuverenga VS Naipaul India?
Kunze Kwemusango, naJon Krakauer
Yakagadziriswa kune iyo cinema muna 2007, Kunzira dzesango ndiyo Chris McCandless's autobiography yakanyorwa naJon Krakauer, ane makore makumi maviri nemana ekuberekwa uyo muna 24 akasarudza kusiya mota yake otyaira achienda kunzvimbo dzine hukasha dzeAlaska achitsvaga kutevedzera nzira yehupenyu yehupenyu. Mutumbi wejaya uyu wakawanikwa usina hupenyu mwedzi yakazotevera, zvichidenha maonero akapesana pakati peavo vaiyemura kugona kwaMcCandless kusiya hurongwa nekutevedzera mararamiro ake, nevaya vakaona muchitokisi kwake chiito chekusaziva pamitemo yezvakasikwa. ..
Idya, Namata, uye Rudo naElizabeth Gilbert
Mushure mekurambana uye nekurwadziwa pamoyo, mutori wenhau Elizabeth Gilbert akazviwana pari pamharadzano isina mweya nekureva. Dambudziko riripo raakasarudza kugadzirisa naro rwendo kuitaly, kwaakadya zvese zvaaigona, India, nyika iyo akazviisa mumafilosofi emweya, kana Bali, kwaakaedza kukumbundira kuwanda kwezvese zvaaifunga. Vachishoropodzwa neavo vanofunga bhuku iri "bhuku rehupenyu hweanofinha, epashure vakadzi," asi vachinamatwa nevaya vanoona basa raGilbert sekurudziro, Idya, Namata, uye Rudo rakashandurwa kuita firimu muna 2010 vachitarisana naJulia Roberts.
Relámete with Idya, unamate uye ude.
Mazana Miles kubva kuManhattan, naGuillermo Fesser
Mutori wenhau mureza chero paanenge aripo, Fesser anga achititaurira nyaya kwemakore makumi maviri nemashanu kuburikidza neGomaespuma asiwo kuburikidza nemabhuku anonakidza seinoMakiromita zana kubva Manhattan. Yakagadzirwa nevanhu vakasiyana uye yavo nyaya, munyori anotisuma isu kune akasiyana nuances, kubva kune tsika dzevaranda kusvika pakupfuura kwemwaka, kuburikidza nenyika izere charisma uye runako runopfuura iwo ma clichés ayo nyika yese yagara yakayera pamusoro. imwe yenyika dzine simba kwazvo pasi rino.
Bato, naErnest Hemingway
Kudzoka muna 1926, Spain yaive nyika yakanganikwa nenyika, kure nekupenya kwemazana emakore apfuura. Munyori wekufambisa wekufamba, Hemingway akarondedzera mukati Fiesta rwendo rweboka revaAmerican nemaChirungu kubva kuParis kuenda kuPamplona, ​​uko kune mukurumbira San Fermin Mahoridhe vakave vanomiririra mifananidzo yekuSpain yechizvarwa chakaratidzirwa nemaronda eiyo Hondo Yenyika Yekutanga. Muchokwadi, Pamplona idodhi mukati mawo kune munyori weThe Old Man uye Gungwa uye The Snows yeKilimanjaro.
Iyo Tao yeMufambi, naPaul Theroux
Inofungidzirwa seimwe ye vanyori vakanakisa venguva ino, Theroux akasimuka kuita mukurumbira mu1976 nekuburitswa kwakakurudzirwa Iyo Great Railway Bazaar, basa rakateverwa nemamwe mazita akadai se Tao yemufambi. Mukureva kune yakakurumbira Chinese huzivi, Theroux akashandisa mukana wake wemakumi mashanu emakore ekufamba kutipa izvi Bhaibheri remufambi mairi munyori anosanganisa vanyori vakamukurudzira kuti aite ruzivo rwake (kubva kuna Mark Twain kuenda kuErnest Hemingway), pamwe nekuratidzira kwakasiyana uye kune simba kuchaburitsa mweya wekufamba uyo waunotakura mukati. Zvese zvinofadza.
Wemusango, naCheryl Akatsauswa
Yakaratidzirwa nekurambana, kufa kwaamai vake uye kupindwa muropa nezvinodhaka, mu1995 American Cheryl Strayed akafunga kutanga chiitiko chega kune famba anopfuura zviuru zvina zvemakiromita kuburikidza neMassif Pacific Trail iyo inomhanya kuburikidza neCalifornia yese. Akashongedzerwa nebhegi uye makirosi ehoats, Akarasikira akapedzisira azviziva iye ari pakati pehunhu umo zvipoko zvekare zvakamirira pane imwe neimwe yemigwagwa. Kufuridzirwa kwakachena kwevaverengi vemaawa mashoma.
Wemusango ndeimwe yemabhuku aya anokurudzira.
Negungwa reCortez, naJohn Steinbeck
Muna Kurume 1940, Europe payakagadzirira Hondo Yenyika Yechipiri, Steinbeck akafunga kutora rwendo rwaaishuvira kwenguva refu. Pamwe chete neshamwari yake, biologist Ed Doc Ricketts, munyori wePearl akatanga rwendo rwemakiromita zviuru zvina kubva kuMonterrey nekumuganhu weBaja California kusvika pakupinda muGungwa risingazivikanwe reCortez. Rwendo rwacho rwakaitika muchikepe cheSardine chinonzi Western Flyer umo munyori akanyora manotsi kuti anozoshanduka kuita imwe mabhuku ekufambisa anonyanya kufadza ezana ramakore rechiXNUMX.
Ungada here kuverenga Negungwa reCortez?
Ndeapi, mune maonero ako, akanakisa mabhuku ekufamba?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » dzakawanda » Mabhuku akanakisa ekufamba